Izilwane ezifuyiwe – The Ulwazi Programme
Izinja ezifuywa ekhaya zihlukene kabili, kukhona izinja ezifuyelwa ukuzingela nezifuyelwa ukugada emakhaya kodwa zombili lezizinhlobo zezinja azexwayani ziyakwazi ukuhlala ndawonye. Izinja Zokuzingela Izinja zokuzingela ezibizwa ngokuthi amabhansi zona umsebenzi wazo ukuzingela kuphela. Lezizinja zitholakala ngokuthi ozifunayo azithenge kulabobantu abazifuyile, baye bathenge umdlwane bese bezikhulisela wona. Umdlwane webhansi ubiza amashumi amabili opondo nopondo abayisihlanu, kanti ubonakala … Read more
Izinkomo esiZulwini zibizwa ngamagama ahlukene ngendlela ezimi ngayo noma ngombala wayo noma ukuma kwezimpondo zayo. Lapha sibuka izinhlobo zezinkomo emikhakheni yazo eyahlukahlukene. Lokhu bekucacisa futhi ngokwaziwa kwezinkomo ubukhethelo bazo nokuthi uma unaloluhlobo lwezinkomo okusho ukuthi uyindoda emadodeni futhi ubuhlonishwa impela. Imfuyo kaZulu yayihlala esibayeni, kuthi izinkomo isibaya sazo sibe phakathi nomuzi sibiyelwe amaxhokovana ukuze imfuyo … Read more
Categories Environment Tags Agriculture, Animals, Ezolimo, Farm animals, Izilwane, Izilwane ezifuyiwe